Hurumende Inoti Air Zimbabwe Haisi Kuzotengeswa
Kurume 12, 2012
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwewezvinhu, VaNicholas Goche, vanoti dare remakurukota rakabvumirana kuti zvakakosha kuti nyika igare iine kambani yayo yendenge nekudaro riri kutora matanho ekuti Air Zimbabwe ivandudzwe kuitira kuti igotanga kushanda zvakare.
Vachitaura pamusoro pekambani iyi kumakomiti maviri eparamende anoti yekutakurwa kwezvinhu pamwe neinoona nezvemakambani ehurumende, VaGoche vati dare remakurukota rakabvuma kuumba kambani itsva yendenge kubva muAir Zimbabwe Holdings uye kambani iyi inenge isina kana chikereti.
Vati kambani iyi ichange ichinzi, Air Zimbabwe Private Limited, inotarisirwa kutanga kushanda munguva pfupi iri kutevera. Vati kambani iyi inoda ndenge nhanhatu, mbiri dzinoenda mhiri kwemakungwa, mbiri munyika dzeSADC, kozotiwo mbiri kana nhatu dzinenge dzichifamba mukati menyika.
Vatiwo kambani iyi inotarisirwa kutsvaga mamwe makambani ainokwanisa kushanda nawo vakatiwo ndenge dzayo dzinenge dzisisabatwa nenyaya yezvikwereti sezvo yakasiyana neAir Zimbabwe Holdings iyo ine zvikwereti zvemadhora zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora.
Vati kambani yeAir Zimbabwe Holdings yave kuparadzwa uye hurumende ndiyo yave kuzobhadhara zvikwereti zvese zvekambani iyi zvinosanganisira mamiriyoni makumi matatu emadhora sechikwereti chekunze.
Vati zvimwewo zvikwereti zviri kumakambani ehurumende akaita seZimbabwe Revenue Authority, National Social Security Authority nemamwe mapazi ehurumende.
VaGoche vati hurumende inokoshesa vashandi nekudaro inoda kuti vashandi veAir Zimbabwe Holdings, avo vange vasiri kutambira kwenguva refu, pamwe neavo vakamiswa mabasa, vapihwe mari dzavo nekukasika.
Pavabvunzwa kuti kambani itsva iyi ichatanga kushandisa ndege dzayo riini, VaGoche varamba kutaura vachiti vanoda kutanga vazeya nyaya iyi nedare remakurukota.
Panyaya yekuti sei makurukota ehurumende asingashandise Air Zimbabwe pakufamba, VaGoche vati kambani iyi yange isiri kufamba zvakataswuka izvo zvaiita kuti vashandise ndege kubva kune mamwe makambani.
VaGoche vati mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanobhadhara kushandisa kwese kwavanoita ndege dzeAir Zimbabwe Holdings uye havana kana chikwereti kubva kukambani iyi.
VaGoche vatiwo pane makambani akawanda aida kushanda neAir Zimbabwe asi izvi zvaitadza nekuda kwechikwereti chikuru chine kambani iyi.
Vatiwo Air Zimbabwe iri kunetseka nezvikwereti kwenguva yakareba nekuti makurukota emapazi emari haana chido chekubatsira kambani iyi.
Asi zvinhu zvakanyaya kuipa gore rapfuura apo ndege dzeAir Zimbabwe Holdings dzakatanga kubatwa kune dzimwe nyika nekuda kwezvikwereti izvo zvakazokonzera kuti kambani iyi imbomisa ndege dzayo dzese kufamba.